Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland - InfoFinland
Nolosha Finland > Waxbarashada > Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland
Finland waxbaad ka baran kartaa adigoo arday bedel ah ama waxaad ku baran kartaa waxbarasho dhameystiran. Haddii aad dooneyso inaad shaqo ka hesho Finland waa muhiin inaad barato luqada Finnishka ama Iswidishka. Waa adag tahay inta badan in Finland shaqo laga helo haddii aan la aqoonin Finnishka ama Iswidishka.
Wixii dheeraad ah ka akhriso: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland
Ardayga bedelka ah
Waad ku imaan kartaa Finland sidii arday bedel ah oo kale. Sida caadiga ah waxaad Finland wax ka baraneysaa sanad barkiis ama sanad. Waxaad bedel waxbarasho ku samayn kartaa barnaamijyo kala duduwan. Tusaale ahaan Erasmus, Nordplus, FIRST iyo Fulbright ayaa waxay bixiyaan boosaska bedelka waxbarasho. Sidoo kale iskaa waad u aadi kartaa bedelka.
Haddii aad dooneyso inaad Finland bedel arday ku timaado, la xiriir goobtaada waxbarashada qeybta arrimaha caalamiga ah qaabilsan ama tusaale ahaan xafiiska waxbarashada.
Liiska xusuusta ee ardayga cusub
Hubi inaad heysto dhamaan kuwan marka aad Finland u imaaneyso waxbarasho:
Codsashada waxbarashada ardaynimo
Waad codsan kartaa waxbarasho xirfadeedka sare ama jaamacad xiliga dalbashada tacliimaha sare. Ka aqriso faahfaahin dheeriya Dalbashada waxbarashada.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iskuul xirfadeedka sare waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Iskuul xirfadeedyada sare. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iskuulaadka tacliinta sare waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Jaamacadaha.
Waxaad sidoo kale jaamacadda ama iskuul xirfadeedka sare ee Finland ka baran kartaa waxbarashada sii-socota. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada sii-socta ka aqri bogga InfoFinlandi Jaamacadaha iyo Iskuul xirfadeedka sare.
Ogolaanshiyada joogitaanka dalka
Marka aad Finland waxbarasho u imaaneyso, baahida ogolaanshaha joogitaanka dalku wuxuu ku xiran dalka aad u dhalatay.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogagga Waxbarasho u imaanshada Finland iyo Muwaadiniinta Midowga Yurub.
Ardayda ajaaniibta ahi inta badan ma helaan kaalmada waxbarashada. Sidaas darteed waa inaad leedahay qorshe ku saabsan sida aad waxbarashadaada Finland ku maalgashaneyso. Si aad u hesho ogolaansha joogitaanka ee ardayga waa in aad muujisaa inaad heysato lacag kugu filan ku noolaansha Finland.
Faahfaahin dheeriya waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Waxbarasho u imaanshada Finland.
Deganaanshaha iyo caymiska
In guri la helo waa adkaan kartaa, sababtoo ah dalabka guryaha ee magaalooyinka waa weyn ayaa ka badan guryaha la hayo. Inta aadan u soo guurin Finland raadi guri. Waxaad guri ka ijaaran kartaa suuqa xorta ah. Waxaad sidoo kale raadsan kartaa guri adigoo sii maraya Guryaha ardayda ee Finland (Suomen Opiskelija-asunnot) (SOA).
Guri degistu waa qaali Finland. Guryaha ardaydu waa ka jaban yihiin guryaha suuqa xorta ah.
Waxaad sidoo kale shaqaadada dhamaadka ah ku sameyn kartaa shirkad ama waxaad ka qeybqaadan kartaa tababar shaqo. Kuwaas waqtiyadooda shaqadu ma xadidna.
Ceymiska ku dadaala. Baaxadda ceymisku wuxuu ku xiran yahay dalka aad ka soo jeedo iyo waqtiga ay qaadaneyso waxbarashadaadu. Aad ayeey muhiim u tahay in mudada aad joogto Finland uu mar walba ceymiskaadu shaqeynayo.
Bogga InfoFinlandi Shaqo ka helista Finland ayaad ka helaysaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqo helidda Finland.
Haddii anad ahayn muwaadin ka tirsa wadamada midowga Europe ama anad ahayn muwaadin ka tirsan wadamada ETA ama anad ahayn qof ka tirsan qoyska dad muwaadiniin wadamadaas ka ah anad timaado Finland si ad wax uga barato bisha sideedaad ee 2017 ama kadib, waa inaad ka bixisaa waxbarashadaada lacagta sanaddugsiyeedka. Lacagtaas waxa laga bixiyaa tacliinta digriiga hoose iyo ka sare ee ku baxa luqada ingiriiska.
Waxaad wax kaga baran kartaa Finland luqada Finnishka, Iswidishka iyo mararka qaar ingiriisi. Iskuulaadka tacliinta sare qaarkood waxay qabanqaabiyaan barnaamijyo waxbarasho oo ku baxaya luqada ingiriiska. Laakiin inta badan waxbarashada waxaa lagu qaadanayaa luqada finnshka ama Iswidishka.
Finland waxaa ka jira ururo arday oo firfircoon. Waxay xitaa waxqabadyo u sameeyaan ardayda ajaaniibta ah. Ururada ardayada waxaad ku baraneysaa dad cusub.
Haddii aad dooneyso inaad shaqo ka hesho Finland, baro luqada Finnishka ama Iswidishka. Inkastoo afka ingiriiska lagu maareyn karo marxalado nololeed badan, inta badan shaqo bixiyayaasho waxay doonayaan aqoonta luqada Finnishka ama Iswidishka. Luqada waxaa sidoo kale laga baran karaa shabakadda.Faahfaahin dheeraad ka aqri bogga InfoFinlandi Luqada Finnishka iyo Iswidishka.
Haddii aadan waqti u helin in qeybtaada waxbarashada aad ka barato luqada Finnishka, qeyb waxbarasheedyada kale ayaa qabanqaabiya koorasyada luqada Finnishka. Faahfaahin dheeraad ka aqri bogga InfoFinlandi Luqada Finnishka iyo Iswidishka.
Waa muhiim sidoo kale inaad barato dadka iyo nolosha shaqo ee Finnishka inta aad ardayga tahay. Waxay taasi kaa caawineysaa adiga helitaanka asxaab, waxayna sidoo kale kuu fududeyneysaa shaqo raadintaada. Tusaale ahaan tababarka shaqo (työharjoittelu), hiwaayadaha iyo ururadu waa qaababfiican oo aad ku baran karto bulshada Finnishka. Faahfaahin dheeraad ka aqri bogga InfoFinlandi Waqtiga firaaqada.
Macluumaadka barnaamijka bedelashadaIngiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 11.06.2020 Boggan war-celin ka soo dir